Author: Kigazuru Dorn
Xubinta Golaha Wakijiada uma bannaana in ay qabato xii kale oo Dawladeed, iyadoo xilkii loo doortay haysa; umana bannaana inay uga faa’iideysato xilkaasi dano gaar ahaaned.
Hawsha oo uu caafimaad darro darteed u gudan kari waayo. Inkastoo Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ahaa madax-bannaan muddo gaaban ee Junewaxaa ka dib midaysan la Talyaani Somaliland si ay u sameeyaan Soomaaliya. Sidaas darteed, dawladdu waxay xil iska saaraysaa shaqo abuuris iyo tayaynta tababarada shaqaalaha.
Isu Celinta Eedaysanayaasha Ama Dembiilayaasha iyo. Dambiyada laga gab xuquuqda qofka sida xasuuqa, di maxkamad la’aan ah, jidh dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf.
Waxa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Iagu dooranayaa qaabka doorashada guud oo toos somalilan isla markaana qarsoodi ah iyaga oo isku lammaan. Si ay u suurta gasho qaban-qaabinta Aftidu, waxa waajib ah in la soo saaro Xeerka Dastuugka iyada oo laga shiidaal-qaadanayo tilmaamaha Dastuurku asteeyey; waxaana la magacaabayaa guddida qaban-qaabinta Aftida si waafaqsan Dastuurka.
Haddii qabashada aftidu suuroobi waydo muddada loo xaddiday, waxa muddada ku meel gaadh ahaan loogu dhaqmayo Dastuurka kolba kordhin kara Baarlamaanka Guurtida iyo Wakiilada. Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka. Waa in uu yahay muwaadin u dhashay Somaliland oo muwaadinimo dawlad kale haysan, balse wuu noqon karaa qoxooti dal kale deggan.
Haddi Golaha Guurtidu oggolaan waayo, ama wax-ka-beddelid uu soo jeediyay Golaha Wakiiladu ku qanci waayo, Golaha Wakiiladu wuxuu xaq u leeyahay in mashruuca-sharciga kalfadhiga xiga ee Golaha Guurtida dib ugu celiyo. Kala sarraynta iyo takoorka ku salaysan issirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reebban dasturka, isla somzliland barnaamijyada lagu cidhib tirayo dhaqamada xunxun ee jireenka dasguurka waa waajib Qaran.
Waax waliba awoodda Dastuurku u gaar yeelay way u madax bannaan tahay. Haddii ay Golayaashu diidaan codsiga xil-ka-tegidda ee ku sheegan faqradda 4aad ee qodobkan waxaa Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenku xaq u somalilanx in uu mar labaad keensado codsi dalab xil-ka-tegis ah muddo aan ka badnayn saddex bilood marki uu codsiga hore qortay; waxaana waajib ku ah labada GoIe in ay xil-ka-tegidda ka oggolaadaan. Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka.
Muwaadin kasta wuxuu xaq u leeya hay in uu ka qayb gab hawlaha siyaasadeed, dhaqaale, buisho 1 iyo hiddaha si waafaqsan xeerarka iyo Dastuurka. Xilka xeer-dejintu uma wareegi karo cid ka baxsan Baarlamaanka. The State of Somaliland lahaa gaar Dastuurka waxaa la qoray horraantii kii, oo ahaa kooban meel.
Kala xadaynta awoodaha saddexda waaxood waxay noqon doonaan sida uu Dastuurku dhigayo. Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida.
Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta madaxda sare ee Dawadda marka aomaliland la tashado Wasiirka ku shaqada leh; isla markaana tixgeliyo Dastuurka iyo xeerarka u gaarka ah. Dawladdu waxay yeelanaysaa Baan dhexe oo hoggaamiya siyaasadda iyo ilaalinta Lacagta Dalka. Daryeelka Qaybaha Bulshada Baylahsan. Dhismaha xoghaynta Golaha Guurtida waxay la mid tahay ta Golaha Wakiilada.
Shaqaalaha dastuurkka iyo xubnaha ciidamada qalabka sida waxay xaq u Ieeyihiin gunnada hawl-gabka iyo kaalmada bukaanka ama shilka iyo kaalmada qofka naafooba oo xeerka waafaqsan. Haddii ay xubin ka mid ah Golaha Guurtida ama Golaha Wakiillada ay ku timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku tilmaaman qodobka 50aad waxaa soo buuxinaysa beeshii uu ka tirsanaa inta laga gaadhayo nidaamka axsaabta ee doorashada.
Waxa Qaranku yeelanayaa Waax Garsoor, oo hawsheedu ta hay u gar-naqa ka dhaxeeya Dawadda iyo dadka; iyo dadka dhexdooda. Shareecadda lslaamku ma oggola in qofka Muslinka ah ka noqdo caqiidadiisa.
Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Labadi kal-fadhi waxaa u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad. Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan miisaaniyadda ku jirin. Qof kastaa waxa uu xaq u Ieeyahay in uu si gaar ah u yeesho hanti, taas oo ay shardi tahay in uu ku helo waddo xalaal ah.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Wakiilada. Dib-u-eegidda xeerarka Golaha Wakiiladu ansixiyo xeerka maaliyadda mooyaane, waxaanu ku celin karaa Golaha Wakiilada hal mar, muddo 30 soddon maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta loo soo gudbiyo xafiiska Shir-guddoonka Golaha Guurtida, isagoo sababaha aragtidiisa qoraal ahaan ugu gudbinaya.
Nafta aadamuhu waa deeq llaahay, waana qaali; qof kastaana wuxuu xaq leeyahay noloshiisa, wuxuuna ku waayi karaa oo keliya marka maxkamad horteed uu ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo.
Maamulka adeegayada bulsho sida caafimaadka, waxbarashada ilaa heer dugsi hoose-dhexe, xannaanada xoolaha, nabadgelyada gudaha, biyaha, nalka, isgaadhsiinta iwm, waxa xilkoodu saaran yahay maamulada gobollada iyo degmooyinka hadba heerka ay hanan karaan. Xuquuqda, xorriyaadka iyo waajibaadka Dastuurku xaqiijiyey, haweenku ragga way ula siman yihiin, wixii Shareecadda Islaamka midkood u gaar yeeshay mooyaane. Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in ay Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda.
Maxamadaha Racfaanka ee Gobolladda; 3. Ku xad gudub Dastuurka. Kala-xadaynta ku tilmaaman faqradda 1aad ee qodobkan, waa inay noqoto mid suurta-gelisa isku filnaansho dasttuurka iyo degmooyinku ka gaadhaan dhinacyada adeegyada bulsho. Haddiise aqlabiyadu intaas ka yaraato, mashruuc sharcigaasi wuu burayaa.